अंग्रेजी सब-टाइटलसहित युट्युबमा हेर्न पाइने ५ इरानी फिल्म :: Setopati
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, चैत २०
इरानी फिल्म 'अ सेपरेसन'को दृश्य।
'आहा! कस्तो जीवनजस्तै जीवन्त फिल्महरू!'
इरानी फिल्म हेरेपछि धेरैले यस्तो भनेका छन्, लेखेका पनि छन्। सामान्य घटनाक्रम, थोरै लगानी तर यथार्थपरक र कलात्मक फिल्मका लागि इरानी सिनेमा संसारभरका दर्शकमाझ प्रख्यात छ। के तपाईंहरू यो लकडाउन बेला इरानी फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ?
मानवीय संवेदनाको सूक्ष्म र जीवन्त चित्रण गर्ने केही प्रतिनिधि इरानी निर्देशकका पाँच फिल्म युट्युबमा सजिलै हेर्न सकिन्छ।
अ सेपरेसन (सन् २०११)
अस्कर अवार्डमा विदेशी भाषातर्फ उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जित्न सफल 'अ सेपरेसन' को केन्द्रमा उच्च-मध्यमवर्गीय इरानी दम्पती छन्। यसमा श्रीमती सिमिन र श्रीमान् नादेरका दुई फरक प्राथमिकता छन्। फरक प्राथमिकताको समाधान उनीहरू सँगै बसेर गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।
'द सेल्सम्यान' र 'द पास्ट' जस्ता सशक्त फिल्मका निर्देशक फरहादीका अरू फिल्मजस्तै यसमा पनि रहस्य र त्यसका पछाडि विविध सम्भावना छन्। यो फिल्ममा उनले मतभेदको कथामार्फत् व्यक्तिगत फाटोसँगै इरानी समाजको सामाजिक, लैंगिक र पुस्तान्तरसम्मका फाटो जोडेका छन्।
द विल्लो ट्री (२००५)
आठ वर्ष उमेरमा आँखाको ज्योति गुमाएका प्रोफेसर युसुफमा आफ्नो भाग्य र भगवानप्रति गुनासो छ। तर संजोग यस्तो जुर्छ, दशकौंपछि उनी फेरि आँखा देख्ने हुन्छन्।
आँखा नदेख्ने मान्छेले संसार देख्न पाउनु कति राम्रो कुरा! धेरैलाई यस्तै लाग्दो हो। 'द विल्लो ट्री' हेरेपछि भने यो बुझाइमाथि शंका उब्जिन्छ। उसलाई विस्तारै आँखा देख्ने युसुफ मन पर्न छोड्छ। उसको यो धारणामा आउने परिवर्तनले दर्शकको मन हल्लाउँछ।
यो फिल्म प्रख्याती इरानी निर्देशक माजिद माजिदीले निर्देशन गरेका हुन्। युट्युबमा अंग्रेजी टाइटलसहित नभेटिए पनि संसार हल्लाउने उनका अरू केही फिल्म खोजीखोजी हेरौं। 'द कलर अफ प्याराडाइज', 'चिल्ड्रेन अफ हेभन', 'द सङ अफ स्प्यारोज' आदि उनका प्रमुख फिल्म हुन्।
क्रिम्सन गोल्ड (२००३)
नन-एक्टरलाई अभिनय गराउँदा चरित्रमाथि न्याय हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने निर्देशकहरू धेरै छन्। यसमा जाफर पनाही पनि पर्छन्।
क्रिम्सन गोल्डका हुसेन पनि त्यस्तै कलाकार हुन्। भनिन्छ, वास्तविक जीवनमा उनी पिज्जा बेच्थे। कहिले नजरबन्द त कहिले थुनामा परेका निर्देशक पनाहीको यो प्रतिबन्धित फिल्म हो। फिल्म अब्बास किरोस्तामीले लेखेका हुन्।
घर-घरमा पिज्जा पुर्याइदिने युवाको निराशा र आक्रोशको कथा बोकेको यो फिल्मको सुरुआतमै मुख्य पात्रले आफूलाई गोली हानेको देखाइन्छ। त्यसपछि फ्ल्यासब्याकमा फिल्मको कथा अगाडि बढ्छ।
उराठलाग्दा र अग्ला पहाडबीच विद्यार्थी खोज्दै एक हुल शिक्षक काँधमा ब्ल्याकबोर्ड बोकेर हिँडेका छन्। शिक्षाको उज्यालो बाँड्न विद्यार्थी खोज्दै हिँडेका ती शिक्षकको भेट गाँस, बास र सुरक्षाको ठेगान नभएका युद्धबाट विस्थापित पात्रहरूसँग भइदिन्छ। यहीँबाट नयाँ यात्रा सुरू हुन्छ।
निर्देशक समिरा मखमलबाफले २१ वर्ष उमेरमा बनाएको यो फिल्म कान फेस्टिभलमा उत्कृष्ट जुरी अवार्ड पाउन सफल भएको थियो।
टेस्ट अफ चेरी (१९९७)
आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगेको एउटा पात्र छ, मिस्टर बादी। उसलाई आफू मरेपछि पुरिदिने पात्र चाहिएको छ। यही खोजीमा गाडी गुडाउँदै यात्रा गर्दा ऊ फरक उमेरका तीन जना बेग्लै पात्रसँग ठोक्किन्छ।
फरक स्वादको 'टेस्ट अफ चेरी' ले कान फिल्म फेस्टिभलमा उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जितेको थियो। किरोस्तामीका क्लोज अप, द विन्ड विल क्यारी अस, द रिपोर्ट लगायत केही छोटा फिल्म पनि युट्युबमा भेटिन्छन्।
यो पनि हेर्नुस्ः युट्युबमा हेर्न मिल्ने राम्रा १२ नेपाली फिल्म
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत २०, २०७६, ०६:११:००
गायक निर्मल दाहालको नयाँ गीत अचेल मायाको भिडिओ सार्वजनिक
युटयुबमा सार्वनजनिक भयो नेपाली सर्ट फिल्म 'एक लभर' (भिडिओ)
‘फक्रिन नसकेको फूल’ लिएर आइन् सिर्जना